China Model No:CBJ Series hydraulic scrap bale breaker machine factory and suppliers | Hlanganisa phezulu
Inombolo yemodeli: Umshini we-CBJ Series hydraulic scrap bale breaker umshini
Umsebenzi: Lo mshini we-CBJ Series hydraulic scrap bale breaker uklanyelwe ngokukhethekile ukuphula amabhala akhishwa ezimotweni zemfucuza noma izinsimbi ezilahliwe.
Izidingo ze-scrap bale block: usayizi we-scrap bale ≤2000mm×800mm×800mm (L×W×H), ukuminyana ≤2.5 amathani/m³.
Umshini we-CBJ we-hydraulic scrap bale breaker ulungele izinkampani zokubuyisela insimbi, izitshalo zensimbi ezilahliwe, amabhizinisi okuncibilikisa nokuphonsa ukuze kuthuthukiswe ikhwalithi yokukhiqizwa kwensimbi eyizinsimbi kanye nensimbi ukuze kuhlinzekwe ukukhiqizwa kwekhwalithi ephezulu kwekhwalithi yemishini yobungcweti,
Umshini we-CBJ wochungechunge lwe-hydraulic scrap bale breaker waziwa nangokuthi umshini wokubola we-press block, isizukulwane esisha sokuhlakazwa okuchwepheshile kwamabhala ensimbi, uhlobo lwemishini yokuhlola. I-CBJ uchungechunge lwe-hydraulic scrap bale breaker umshini ungathola ukungcola kubhulokhi yephakheji yomsebenzisi, ukuqinisekisa okuqukethwe kwensimbi eyi-scrap, ukuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo yensimbi yensimbi, ukugcina ukuzinza kwemakethe yensimbi yensimbi, uchungechunge lwe-CBJ lwe-hydraulic scrap bale breaker umshini isetshenziswa kakhulu ezimbonini zensimbi, zokuncibilikisa, insimbi, i-wharf nezinye.
●I-CBJ series hydraulic scrap bale breaker machine inezincazelo ezahlukene namamodeli, angahlangabezana nezidingo zamakhasimende ahlukene.
● Izinhlobonhlobo zemishini zingengezwa ngokwezidingo zamakhasimende
●Umshini we-CBJ wochungechunge lwe-hydraulic scrap bale breaker awudingi ukulungiswa nokufakwa
● Ukusebenza okulula kwe-PLC, ukuzinza okuqinile, isici sokuphepha esiphezulu, ukuhlukaniswa ngokuphelele.
●Umshini we-CBJ wochungechunge lwe-hydraulic scrap bale breaker unomsindo ophansi, akukho ukudlidliza.
●Izinga eliphezulu lokuzenzakalela, ukukhiqiza okuphezulu
●Ngesikhathi sokusebenza komshini we-CBJ Series hydraulic scrap bale breaker machine, ungalungisi, ungathinti izingxenye ezinyakazayo, ungacindezeli izinto ezisebhokisini lempahla ngezandla noma ngezinyawo zakho.
I-CBJ series hydraulic scrap bale breaker machine inikezela ngamafutha kumjikelezo kawoyela odidiyelwe ngephampu ye-hydraulic plunger, bese iwadlulisela kusilinda esisebenza ngehydraulic ngokusebenzisa i-valve yemanuwali esabalalisiwe ukuze ikhiqize amandla. Ukucindezela kungalungiswa esilinganisweni esidingekayo ngokusho kwesimo sangempela (isilinganiso siboniswa yi-gauge ye-pressure).I-baler ye-hydraulic ihlukaniswa ngokubamba nokucindezela i-hydraulic manipulator, futhi ihlakaze amabhala ngokubola okuningi.
Umshini we-CBJ wochungechunge lwe-hydraulic scrap bale breaker wakhiwe injini eyinhloko, isistimu ye-hydraulic, i-manipulator, i-butterfly beam, ithangi likawoyela, iphampu kawoyela kanye nemoto.
2.I-claw head blade eshintshwayo
I-replaceable high - i-alloy steel blade yamandla isetshenziswa ekhanda le-claw, ithuthukise ukumelana nokugqoka kanye nempilo yesevisi ye-claw hook.
Umshini we-CBJ wochungechunge lwe-hydraulic scrap bale breaker wamukele i-hook yesayensi kanye nesakhiwo sezinzipho, izinzipho zehhuku zisika ephaketheni kangcono, okwenza kube lula ukuqaqa.
3. Idizayini engazweli yezingxenye ezibalulekile zikaloliwe
Ngokuhambisana nezici zokuguga zesitimela somhlahlandlela nezinye izingxenye ezifanele zohlaka, i-alloy steel plate enamandla angagugi ifakwe kuhlaka.
Imodeli Ingcindezi yamagama (Ton) Usayizi we-bale okhishwayo（mm） Amandla (KW)
I-CBJ-1200 120 ≤ 600 x 600 18.5
I-CBJ-1600 160 ≤ 800 x 800 22
Umshini wethu we-CBJ Series hydraulic scrap bale breaker uhlinzeka ngezingxenye zomshini womkhiqizo odumile, besisebenzisana nabaphakeli abaningi bomkhiqizo abadumile emhlabeni wonke, njengo-SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI njalonjalo iminyaka engaphezu kwe-10.
Imodeli encane Umshini wethu we-CBJ Series hydraulic scrap bale breaker ungavikelwa kahle esitsheni esisodwa esingu-40 HQ. Uma sihamba ngesikebhe, sizovala i-poncho kanye nedekhi yokulayisha ukuze sivikele umshini wethu we-CBJ Series hydraulic scrap bale breaker.
Buka uchungechunge lwe-CBJ umshini we-Hydraulic Scrap Bale Breaker usebenza!
Okwedlule: Inombolo Yemodeli: Umshini WaseShayina Wokukhiqiza Okuzenzakalelayo Wokulawula I-WS Series Hydraulic Scrap Metal Container Shear Machine
Olandelayo: Inombolo Yemodeli: Umshini Wokushibilika WamaShayina Wokukhiqiza Okuzenzakalelayo we-SPJ Series
umshini we-hydraulic scrap bale breaker
I-Pop-Top Can Baler Equipment, I-Cardboard Baler eyenziwe ekhaya, I-Scrap Metal Compactor, Umshini we-Aluminium Foil Baler, I-Leaf Compactor kanye ne-Baler, I-Y81 Hydraulic Baler,